ကိုဗစ်ဖြစ်ပေမယ့် ဘာလက္ခဏာမှ မပြပဲ လူနာတွေ သေဆုံးနေရတဲ့အကြောင်းရင်း – BaHuTuTa
November 23, 2020 admin Health, Knowledge 0
ကိုဗစ်မှာ အရမ်းသတိထားရမယ့် Honeymoon Hypoxia လက္ခဏာ ။ hypoxia ဆိုတာဘာလဲ ?ပြောရရင် အောက်ဆီဂျင်အရမ်းကျနေတာ ( hypoxia ) ကို monitor မှာ ပြနေတယ် ။ သို့ပေသိ လူနာမှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြဘူး ( ဥပမာ . . . မောတာ ) ။ ဆိုတော့ကာ လူနာက ဘာလက္ခဏာမှမခံစားရဘူး ( This is Covid 19 ) ။ မခံစားရတော့ နေသာသလိုနေတယ် ။ ပြောစကား နားမထောင်ဘူး ။
ဦးလေးရေ / အဒေါ်ရေ . . . ဒီမှာတော့ အောက်ဆီဂျင်ကျနေပါတယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး မှောက်ရက်နေပေးပါ ။ နည်းနည်းလေးမှ မလှုပ်ပါနဲ့ ။ အိမ်မြန်မြန်ပြန်ချင်ရင် အောက်ဆီဂျင်ကို အားစိုက်ရှုပေးပါ ။ တစ်ခုခုလုပ်ချင်ရင် အထဲမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေ ၊ ဆရာမတွေ ၊ ဗိုလံတီယာတွေကိုပြောပါ ။ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုသာ အားစိုက်ပြီးရှုပေးပါ ။
အာပေါက်မတတ်ပြောတယ် ။ လိပ်ခေါင်းထွက်မတတ်ပြောတယ် ။ သို့ပေသိ honeymoon hypoxia @ happy hypoxia လို့ခေါ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်တဲ့လက္ခဏာကို လူနာကမခံစားရတော့ ဟောရင်းသာ ပျံလွန်တော်မူသွားမယ် . . . လူနာတွေက စကားနားမထောင် ။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အောက်ဆီဂျင်အကူအညီမပါပဲ အိမ်သာထသွားတော့ လူနာက အိမ်သာသွားတဲ့လမ်းမှာတင် ကိစ္စပြတ်သွားတယ် ။
စိတ်ဓာတ်တွေက ကျပြီးရင်းကျပဲ ။
zawgyi ဖြင့် ဖတ်ရန်
ကိုဗစ်မှာ အရမ်းသတိထားရမယ့် Honeymoon Hypoxia လက္ခဏာ ။
hypoxia ဆိုတာဘာလဲ ? ပြောရရင် အောက်ဆီဂျင်အရမ်းကျနေတာ ( hypoxia ) ကို monitor မှာ ပြနေတယ် ။ သို့ပေသိ လူနာမှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြဘူး ( ဥပမာ . . . မောတာ ) ။ ဆိုတော့ကာ လူနာက ဘာလက္ခဏာမှမခံစားရဘူး ( This is Covid 19 ) ။ မခံစားရတော့ နေသာသလိုနေတယ် ။ ပြောစကား နားမထောင်ဘူး ။
respectfully credit to Tayzar maung maung
သားငယ်အတွက် ဆေးကုသစရိတ်မတက်နိုင်တော့လို့ဆိုပြီး ဆေးရုံရှေ့မှာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေခဲ့တဲ့ မိခင်